Tekinoroji Kushambadzira: Iyo Apple Fomula
Chipiri, January 11, 2011 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Tekinoroji kushambadzira, zvinopesana nekutengesa tekinoroji, ndiyo nzira iyo zvigadzirwa nemasevhisi mune tekinoroji akaiswa kune vangangove vatengi. Sezvo nyika yedu uye hupenyu zviri kufamba online… iyo nzira matekinoroji ari akanakisa, inotungamira mienzaniso yekuti ungashambadze sei uye kushambadza zvakazara.
Zvakaoma kusafunga nezve tekinoroji kushambadzira pasina kutaura neApple. Ivo vanoshamisa vashambadzi uye vanoita basa rakatonaka pakuzviisa pamusika wakazara nevanhu nematani emakwikwi… uye ivo vanoramba vachiwana mugove wemusika uye purofiti. Core kushambadziro kwaApple haisi kutaura nezve mutengo uye maficha ... asi pachinzvimbo chekutarisa kune vateereri.
Ini pandinoona Apple yekushambadzira mushandirapamwe, ndinotenda yega yega yakaputsika pasi kune mashoma mazano:
Purity - kazhinji, mushandirapamwe wega wega une meseji yakanangwa uye vateereri… haichazomboitika. Mifananidzo yacho yakapusa, pamwe neshoko. Zvakajairika kuApple kungova nechena kana dema mamiriro ... kuti iwe ugone kutarisisa kutarisisa kwako kwavanoda kuti kuve.
Ropafadzo - Apple chiratidzo chemuenzaniso chinoburitsa zvigadzirwa zvinoyevedza uye zvakanaka. Ivo vanokuita iwe chido kuva chikamu chechitendero. Taura kune chero mushandisi weApple uye ivo vagogovana zuva ravakatama uye havazombocheuka kumashure.
Zvichida - Apple zvakare inoita basa rakakura rekutora mukati mayo vavariro vateereri 'psyche. Paunoona Apple mushandirapamwe, unotanga kufungidzira zvaunogona kugadzira nechigadzirwa chavo.
Heino kushambadzira kwechangobva kuitika kwe Ini hupenyu (yandakatenga nguva pfupi yadarika):
Uku kushambadzira kune simba… pachinzvimbo chekutarisa padambudziko, kumisikidza (zvakaitwa neApp ne Mac kushambadzira nePC kushambadzira), kana maficha, Apple inotarisa kune vateereri. Ndiani asingade kugadzira mavhidhiyo emamwe mafirimu epamba uye oashandura kuita eHollywood-maitiro clip?
Dzimwe nguva makambani anobaya izvi kuburikidza nekushandiswa kwevatengi zvipupuriro ... asi Apple inoita kunge ichitozvidzivirira izvo. Ivo vanongodyara mbeu… uye vanobvumira fungidziro yevateereri kuti iite zvimwe zvese. Ndeapi manzwiro angave ako kambani, chigadzirwa kana sevhisi kupinda mukati? Ungaita sei zviri nani kuisa kushambadzira kwako kuti upinde mune izvo zvekunzwa?
Tags: kushambadzira kweapuroapple kushambadzira fomulakushambadzira fomulagonekoropafadzoPurity
Email Kushandura neWordPress uye Yangu Campaign Pro
Jan 12, 2011 pa 12: 46 AM
Ini ndinowana iri dambudziko kwete chete muhunyanzvi asi mune mazhinji mabhizinesi. Zvizhinji zvekushambadzira nhasi kunoitwa nevaridzi vemabhizinesi zvichiri kutarisirwa senzvimbo yekuredza nemabhizinesi anotumira meseji yakawandisa vachitarisira kuti inosvika kumusika wakakodzera. Semuenzaniso ini pari zvino ndiri kushanda pamwe nedzimba dzevadzidzi dzimba dzinongoshandisa kushambadzira kune vese vadzidzi vepakoreji asi pakuita kumwe kutsvagurudza kwemusika takawana pamusoro pe80% yevagari vaive vechidiki avo vaive vachangobuda dzimwe dzimba nekuda kwekushomeka kwevatengi uye kupisa kukuru. Isu takakwanisa kumutsiridzazve yekushambadzira meseji uye yepakati kuti titarise iwo chete musika. Ndakaona izvi zvakawanda mune mamwe maindasitiri futi. Yakanaka blog.
Jan 13, 2011 pa 5: 13 AM
Doug - iwe unogona kunge wakazondibhowa kuti ndinyore blog blog ini ndanga ndichireva kunyora.